'ग्रीन टि' ले पनि बढाउँछ सुन्दरता, सुन्दर बन्नकोलागी ग्रीन टी अनुहारमा कसरी प्रयोग गर्ने त ! – Samacharpati
Home » ‘ग्रीन टि’ ले पनि बढाउँछ सुन्दरता, सुन्दर बन्नकोलागी ग्रीन टी अनुहारमा कसरी प्रयोग गर्ने त !
प्रकाशित मिति: 2076 असोज2बिहिबार(September 19, 2019) 4:13 PM बजे Posted By:Sunita Karki
काठमाडौँ, २ असोज । सुन्दर देखिनका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउनु पर्छ । अझ अनुहारको सुन्दरताको लागि त बजारमा पाइने विभिन्न किसिमका ब्यूटी प्रोडक्टहरु र घरेलु सामग्रीहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । घरमा प्रयोग हुने सामग्रीले पनि हाम्रो छाला सुन्दर बनाउन सकिन्छ । घरमै पाइने बेसार, दही, कागती, मेवा, बेसन, ग्रीन टी आदिको प्रयोगले हाम्रो छालालाई सुन्दर र चम्किलो बनाउन सकिन्छ ।
ग्रीन टी फेस प्याक बनाउने तरिका
मेवा र ग्रीन टीको फेस प्याक
चामलको पिठो र ग्रीन टीको प्याक
स्ट्राबेरी र ग्रीन टीको फेस प्याक
अदुवा र ग्रीन टीको फेस प्याक
Tags: greentea, health news, health teps, kathmandu news, ग्रीन टी